January 16, 2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on January 16, 2021 Author admin	Comments Off on ကြုံတွေ့ချင်နေမိသည်
Posted on January 16, 2021 Author admin	Comments Off on ကြုံခဲတဲ့ညတည
သဲ ရောက်တော့မယ်…. ကို က အသာလှုပ်နှိုးတော့မှ မိမိ ခါးလေး မတ်လိုက်သည်။ အပြင်ဘက် ကြည့်မိတော့ တရိပ် ရိပ်ပြေးနေသော သစ်ပင် တောင်ကုန်းများကို တွေ့နေရသည်။ ”အင်း” ရှုပ်ပွနေသော ဆံပင် ကိုသပ် တွန့်နေသော အင်္ကျီကို အသာဆွဲချလို့ မိမိတို့ နှစ်ယောက်အပေါ် ခြုံထားသော စောင် ကိုလည်း ဆွဲဖယ်ခေါက်သိမ်းသည်။ ”ကို ညက အရမ်းဆိုးတာပဲ” ”သဲ ကလည်းကွာ ချစ်လို့ပေါ့” ပြောရင်းနဲ့ ကိုယ်က မိမိပါးလေးကို ရွှတ်ခနဲ နမ်းသည်။ ”တော်ပါ” ချောင်းသာသို့ ရောက်ခါနီးလို့ လမ်းတွေက အကွေ့အကောက် ပိုများလာသည်ထင်သည်။ကားကြီးက လှုပ်ရမ်းနေသည်။မိမိတို့ ရှေ့ခုံက လင်မယားနှစ်ယောက်တော့ အိပ်ပျော်နေသေးလားမသိ။တုပ်တုပ်မှ မလှုပ်။ ”ဟိုနှစ်ယောက်တော့ အိပ် ကောင်းနေတယ် ထင်တယ် ကို […]
Posted on January 16, 2021 Author admin	Comments Off on အစပြုခဲ့လေသောအခါ
Posted on January 16, 2021 Author admin	Comments Off on ချစ်သူငယ်ချင်းမလေး
ကျွန်တော်အောင်ဇော်က ရှက်တတ်တဲ့ကောင်လေး တစ်ယောက်ပါ ။အရှက်ကြီးသလို အကြောက်ကြီးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်ဖြေပြီးမှ အရှက်ကြောက်ကြီးသူကနေ တွေ့မရျောင်တဲ့ ရှက်တတ်ယောင်ဆောင် ကြောက်တတ်ယောင်ဆောင်သူ ဖြစ်သွားတယ် ။ ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော့ကိုပညာသင်ပေးသူက သူငယ်ချင်းအမေ ဒေါ်မိုးမိုးခိုင် ဖြစ်ပါတယ် ။ သူက တစ်ခုလတ် ကလေးတစ်ယောက်အမေ သူယောက်က်ျားက သူ့ကိုကွှာရှင်းကာ သားအတွက်လစဉ်ထောက်ပံ့ပေးပြီး သူပိုင်ဆိညင်တဲ့ငွေနှင့်အိမ်ကိုပေးထားခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော့ရဲ့ သူငယ်ချင်းက ရှိန်း ရှိန်းသူရိန်ပေါ့ ။ ဒီကောင်နှင့်ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကျောင်းအတူတူတက်ပြီး နေလာခဲ့ကြတာပါ ။ သူလိုဘဲ နောက်ထပ်သူငယ်ချင်းအရင်းကြီး ငါးယောက်ရှိပါသေးတယ် ။ မိန့်ခလေးသုံးယောက်ပါ သူတို့က သွယ်သွယ် ၊ ဖြူပြာနှင့် ချယ်ရီ ဆိုပြီး မိန့်ခလေးသုံးယောက်ပေါ့ ။ ကဲ့ဗျာ ဇတ်လမ်းက များတော့ […]
Posted on January 16, 2021 Author admin	Comments Off on တခုလပ်အန်တီကြီးများ
ဆုရည်မွန် တစ်ယောက် နိုင်ငံခြားမှပြန်လာပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်အဆက်အပေါက်များပိုမိုထွားလာသည် ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးအောက်မှ လုံးထွားဝိုင်းနေသော တင်လုံးကြီးများမှာလမ်း လျှောက်လိုင်းတိုင်းတုံခါ၍သွား သည် ဖြစ်ညှစ်ချင်စရာ ကောင်းလှ၏ မို့မောက်လှသော ရင်နှစ်မြွှာမှာလည်း ဆွဲညှစ်ပြီးစို့ချစ်စရာ လေဆိပ်မှအိမ်သို့ ရောက်သောအချိန်မှာ မနက် ဆယ်နာရီခန့် ရှိပြီ အိမ်၌ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ နှစ်ယောက်ပဲနေသည် ဖြစ်ရာ ဆုရည်မွန် နိုင်ငံခြားသွားသည့် နေ့မှစ၍အိမ်မှာ ခြောက်ကပ်ခဲ့သည် ယခု ဆုရည်မွန်ပြန်ရောက်ပြီးသကာလ ကျွန်တော့်တို့အိမ်မှာပြန်လည်စိုပြေလာတော့ပါမည်။ ဆုရည်မွန်သည် အိမ်ထဲသို့ဝင်ဝင်ချင်းခရီးဆောင်အိတ်များအား ချကာ။ ရှုပ်ပွနေသော ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရင်း အမယ်လေး ငါမောင်တို့များအမနိုင်ငံခြားသွားရင် အိမ်ဖော် ငှားပါဆို မငှားတော့ အိမ်က ရှုပ်ပွနေတာပဲ´ဟု ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်ပြောရင်း ပစ္စည်းများအား လိုက်သိမ်းနေလေသည် ကျွန်တော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် ညည်းစီစီဖြစ်နေသဖြင့် ရေချိူးဦးမယ် ဟုပြောပြီး ရေချိူး ခန်းတွင်ရေကိုတစ်ဝကြီးချိူး လိုက်လေသည် […]
Posted on January 16, 2021 Author admin	Comments Off on အပျိူစင်ဘဝလေး
ကျောင်းဆရာမလေးဆွေဆွေမြင့်တယောက် ထမင်းစားနားချိန်ဝယ် ဖုန်းဖွင့်လိုက်ပြီး ဖေ့ဘုတ် သုံး နေခိုက် မက်စင်ဂျာကနေစာပို့တာတွေ့လိုက်သည် အော်…ကျော်ကို့ဆီကကိုး ” ဟိုင်း…. ထမင်းစားပြီးလား ဆွေဆွေ ” သူမ ချစ်သူဟောင်းပေါ့ အခုတော့အိမ်ထောင်ကိုယ်စီ နဲ့ဖြစ်နေကြပါပြီ… ” အေး ပြီးပြီ နင်အခုဘာတွေလုပ်နေလည်း” ” ငါလား စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လျှောက်သွားနေတာဟ အခုတောင်နင်စာသင်နေတဲ့ရွာနားကငါ့ဦးလေးစိုး ခြံထဲမှာ ” ” ဟင် နင်ဘာတွေဖြစ်နေလို့လည်းပြောပါအုံး” “ငါ မမိုးနဲ့ကွာရှင်းပြီးတာ ဆယ်ရက်လောက်ရှိပြီ ခလေးကတော့သူနဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့ဟာ” ” ဟယ် ဖြစ်ရလေ ကျော်ကိုရယ် စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ” အဲ့ဒါတွေအသာထားဟာ အခုနေ့လည်ခင်းငါနင်နဲ့ အေးဆေးတွေ့ပြီးစကားပြောချင်လို့။ အဲ့ဒါ နင် ဦးလေးစိုးခြံထဲလာခဲ့ပါလား ဒါမှမဟုတ်ငါလာ ခေါ်ရမလား… ဆွေဆွေမြင့် ကျော်ကိုနဲ့အခုလိုနှစ်ယောက်ထဲသွား တွေ့လို့ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင် ” ဟင့်အင်းးငါမအားဘူးလေ စာသင်ချိန်ရှိသေးတယ် […]
မောင်သက် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေပြီးတော့ အဘွားတို့ ရွာသွားနေခဲ့သည်။ ဒီမှာက လွတ်လပ်တယ် အဘွားတို့ကလဲ ဘာလုပ်လုပ် မဆူမဆဲ သောက်လိုက်စားလိုက် လယ်ထဲယာထဲလိုက်ကူလိုက် နေ့လည်နေ့ခင်းဆို အမျိုးတွေအသိတွေ အိမ်လည်လိုက်နဲ့ တစ်လလောက်တောင်ရှိသွားပြီ အသိအိမ်က အမကြီးတစ်ယောက်က မသူဇာတဲ့ ဖြူဖြူဖွေး ရေဆေးငါးကြီး မြို့မှာကိုး တန်းထဲကကျောင်းသွားတက်ပြီး ဆယ် တန်း သုံးခါကျနဲ့ ရွာပြန်လာပြီး အ်ိမ်မှာပဲ အသုပ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ် သူတို့က သာမန်လူတန်းစားပါ မြို့မှာကျောင်းနေတာလဲ သူ့အဒေါ်ခေါ်ထားပေးတာတဲ့ ခုတော့ သုံးခါကျလို့ သူဆက်မနေချင်လို့ပြန်လာတယ် ပြောတာပဲ။ ကျတာလဲမပြောနဲ့ ရည်းစားခပ်များများတဲ့ အကိုဝမ်းကွဲပြောတာ နောက်တစ်ယောက်က ဦးလေးခယ်မ မနုနုဝင်း ကျွန်တော့်ထက် ငါးနှစ်လောက်ကြီးတယ် သူကတော့ တောသူပီပီ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်အသားညိုညိုနဲ့ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေး။ သူလဲ အိမ်မှာ အမကလေးထိန်း ထမင်းဟင်းချက် ဒါပဲ သူက ခြောက်တန်းလေက်ပဲအောင်တာ ရည်းစားထာဖူးလားမထားဖူးလားတော့ […]
Posted on January 16, 2021 Author admin	Comments Off on အစ်မကိုမညှာနဲ့
Posted on January 16, 2021 Author admin	Comments Off on ကန့်သတ်ချက်မရှိ